Wararka - Sababaha iyo faa'iidooyinka xirmada qalliinka ee la habeeyay
Sababaha Iyo Faa'iidooyinka Xidhmada Qalliinka ee La Habeeyey
Xirmada qalliinka ee la habeeyay waxaa ku jira qalab hal mar la isticmaalo, taas oo lagama maarmaan u ah dhakhaatiirta caafimaadka si ay u fuliyaan qalliinno. Dhammaan aaladahaan waxaa lagu xiraa baakado madhalays ah waxaana loo diraa qolka qalliinka. Warshadaha aaladda caafimaadka ayaa iskaashi la sameeya dhakhaatiirta iyo dhakhaatiirta kale si loo naqshadeeyo loona bixiyo baakadaha qalliinka waqti habboon oo wax ku ool ah. Xidhmada qalliinka waxay dooratay qaybo, oo ay ka mid yihiin: shukumaannada daloolka qalliinka, suufka qalliinka, suufka, baalasha qalliinka iyo dhayida nabarka. Waxa kale oo ku jiri kara qalab khaas ah sida kateetarka wadnaha iyo maqaar -galaha. Waxaa jira faa'iidooyin badan oo ku saabsan adeegsiga xirmada qalliinka ee la habeeyay. Halkan waxaa ah shan sababood oo ay tahay inaad ka fikirto adeegsiga xirmada qalliinka ee la habeeyay.
Iyada oo awood u siineysa dhakhaatiirta caafimaadku inay u shaqeeyaan si hufan oo ay sidaas u fuliyaan habab badan, xirmooyinka qalliinka ayaa lagama maarmaan u ah inay soo saaraan tallaabooyin wax-ku-ool ah. Daraasadaha badankoodu waxay muujiyeen in hawlgallada maalinlaha ah ee xarumaha caafimaadka ee u beddelay xirmooyinka qalliinka ay kordheen 30-40%. Maadaama aysan cosbitaaladu haysanin qalab caafimaad oo aad u badan, taas oo sababi karta in xariiqa wax -soo -saarku si tartiib ah u socdo, maareynta kharashku way fududahay. Tani waxay ka caawineysaa qofka mas'uulka ka ah inuu si sax ah u xisaabiyo qiimaha gaarsiinta. Xirmooyinka qalliinka waxay yareeyaan kharashaadka maareynta iyagoo yareynaya waqtiga loo baahan yahay si loo dalbado loona hayo sumadaha alaabada.
Wakhtigii ay shaqaaluhu ku qaadan jireen diyaarinta iyo xulashada qalabka caafimaadka ee qalliinnada ayaa si weyn hoos loogu dhigay, cadaadiska iyo waqtiga samaynta rugo caafimaad ayaa sidoo kale la yareeyey. Iyada oo la yareeyo saldhigga sahayda, taas oo ah, u oggolaanshaha alaab -qeybiyeyaal badan inay bixiyaan alaab -qeybiyeyaasha kala duwan, bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku waxay badbaadin karaan waqtiga maamulka, waqtiga la keydiyeyna waxaa loo adeegsan karaa daryeelka bukaanka.
Xirmada qalliinka waxay bixisaa qalabka saxda ah waqtiga saxda ah, qaabeynta saxda ah iyo goobta saxda ah. Baakadaha qalliinka waxay ku bixiyaan dhammaan qaybaha hal xirmo oo madhalays ah, taas oo bixinaysa xakamaynta aseptic habboon oo bukaannada ka dhigaysa kuwo u nugul cudurrada la xiriira daryeelka caafimaadka. Iyada oo la kordhiyo wax soo saarka bukaanka iyo in la yareeyo waqtiga jawaabta, xirmooyinka qalliinka waxay hagaajin karaan tayada adeegga.
Maadaama dhammaan qaybaha la wada baakadeeyay, raad -raaca dufcadaha waa la fududeeyay. Sababtoo ah isticmaalka baahsan ee xirmooyinka qalliinka, ururo badan oo adeegsada xirmooyinka qalliinka ayaa jaangooyey habraacyo badan, taas oo kor u qaadaysa tayada. Bixiyeyaasha daryeelka caafimaadku waxay si fudud u horumarin karaan tilmaamo si habboon u qiimeeya naftooda iyagoo ku salaynaya shuruudo la dejiyey oo loo qaadan karo inay aad u adag yihiin.
Xaddiga qashinka ay soo saarto halbeeg ayaa lagu dhimi karaa ilaa 50%.
5. Hagaajinta hufnaanta
Wax -ku -oolnimada sare macnaheedu waa in wakhtiga diyaarinta uu aad u dheer yahay, sidaa darteed habab badan ayaa lagu dhammayn karaa maalin gudaheed. Wuxuu yareyn karaa waqtiga sugitaanka bukaanka, wuxuuna geli karaa goor hore